စားဖိုမှူးပြီးတော့ဌာနမှူး Cook ကယောဘဖျေါပွခကျြ / ခံမှု Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / စားဖိုမှူးပြီးတော့ဌာနမှူး Cook ကယောဘဖျေါပွခကျြ / ခံမှု Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 3,714 views
Maintenance And Repair Workers, အထွေထွေယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
ဘီလ်ပြီးတော့အကောင့် collector ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့ဂျော့ဘ်
တိုက်ရိုက်နှင့်ပြင်ဆင်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, နှင့် muffins ငါးပြင်ဆင်နေ, အသား, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, သုပ်, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်အစားအစာများ. ရွေးချယ်ရေးပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်ကုန်ကျနိုင်ပါစေ, ထုတ်ကုန်ဝယ်ဖို့, နှင့်အချက်အလက်များနှင့်အကောင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်.
အစားအသောက်ပြင်ဆင်နေအတွက် operating လုပ်သားများသို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြီးကြပ်သို့မဟုတ်စည်းရုံး.
အလုပ်ဒေသများအချို့စေရန်, devices များ, သို့မဟုတ်သက်သေပြချက်စံဖို့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများထိန်းလိုက်နာအပ်သောစစ်ဆေးခြင်း.
အစားအစာများကိုမိတ်ဆက်ရပါမည်ကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်နဲ့အလှဆင်ဖြစ်ကြောင်းအစားအစာ features တွေ generate.
ကွဲပြားခြားနားသောချက်ပြုတ်နည်းများသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ဆည်းပူးဖို့အစိတ်အပိုင်းများစားသုံးသူသို့မဟုတ်ရာသီ option ကိုပင်ဖြစ်နိုင်ခြေငွေပမာဏအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထိုကဲ့သို့သောဒြပ်စင်သို့ယူပြီးဖြစ်ကြောင်းလုပ်သားများနှင့်အတူပူးပေါင်း.
အရာဝတ္ထု menus မှစျေးနှုန်းများလွှဲအပ်ရန်ဟင်းလျာများစစ်ကြော, အစားအစာအပေါ် predicated, အလုပ်, နှင့်စရိတ်ကုန်ကျစရိတ်.
အမျိုးမျိုးအစားအစာများပြင်ဆင်ပါနှင့်အောင်, ဖြစ်နိုင်သည်မကြာခဏအခြေခံအုတ်မြစ်ကျော်သို့မဟုတ်သီးသန့်ဧည့်သည်များသို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်..
န်ဆောင်မှုများပုံမှန်ပေးဝေရေးသေချာစေရန်လိုအပ်သော output ကိုအစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ထမ်းများသတ်မှတ်ချက်များဆုံးဖြတ်.
ဝန်ထမ်းများ Get နှင့်ငှားရမ်း, ထိုကဲ့သို့သောတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးလည်းသည်အခြားအိမ်တွင်းလုပ်သားများအဖြစ်.
အထူးသဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းအခြေအနေများအဘို့အ menus တွေကူးဖို့ဖောက်သည်နှင့်တွေ့ဆုံ, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်ဘို့အဖြစ်, ပါတီများက, သို့မဟုတ်ပွဲ.
တောင်းဆိုမှုပြုပြင်မှုများသို့မဟုတ်ဂီယာ လုပ်. ဝယ်ယူခြင်းများ.
ပြင်ဆင်ထား, မူလတန်း, သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော Diner ကွင်းဆက်ဥပမာအဖြစ်တည်ထောင်အတွက်အများအပြားမီးဖိုချောင်သို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ၏စားသောက်ကုန် prep သို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်လှုပ်ရှားမှုများကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ, ဆေးရုံ, သို့မဟုတ်မိုတယ်.
ညှိနှိုင်းရေးဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ကလပ်အပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွင်းရိက္ခာရှိသမျှကိုလုပျထုံးလုပျနညျးအဘို့အလေးလည်း, မိုတယ်, သို့မဟုတ်ကဖီးချည်နှောင်.
Reading နားလညျမှု-သိအလုပ်-ဆက်စပ်ဖိုင်တွေထဲမှာအကြောင်းအရာနှင့်လိုင်းများ created.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားအ-လူတွေကအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုပေးခြင်းဟုအဘယ်သို့, ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့်အချက်များကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့အချိန်ရတဲ့, မှန်ကန်သောအဖြစ်မေးမြန်းမေးမြန်းချက်, အစားမှားယွင်းတဲ့အခါသမယမှာလမ်းပြနေထက်.
လာမည့်နှင့်လက်ရှိ problemsolving နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့် ပတ်သက်. တက်ကြွစွာသင်ယူခြင်း-နားလည်မှုလတ်ဆတ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကို.
သို့ချဉ်း ကပ်. -Pick သင်ယူခြင်းနှင့်တိကျသောအခွအေနေပညာပေးသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာလတ်ဆတ်ဖြစ်ကြောင်းကိစ္စများကျွမ်းကျင်များအတွက်သင့်လျော်သော coachingPEReducational မဟာဗျူဟာများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြု..
မိမိကိုယ်ကို၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-OverseeingOREvaluating စွမ်းဆောင်ရည်ကို, မတူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှေးရှေး, သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်မှုများထုတ်လုပ်ရန်.
လူမှုသူတို့တုံ့ပြန်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလုပ်ပေးနေချိန်မှာ othersA တုံ့ပြန်မှုသတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့် သိ..
othersI လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. ညှိနှိုင်းရေး-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ.
တစ်ဦး layout ကိုအောင်အကဲဖြတ်-ဆန်းစစ်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကို item သတ်မှတ်ချက်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ.
နည်းပညာစားသုံးသူများနှင့် align လုပ်ဖို့ tools တွေကိုအစေခံရန်ဒီဇိုင်း-Technology သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒများကိုထုတ်လုပ်.
ဂီယာရွေးချယ်ရေး-ဆုံးဖြတ် tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ကြင်နာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
တပ်ဆင်နေ-Installing စက်တွေ, ပစ္စည်းကရိယာ, ဝါယာကြိုးများ, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်အစီအစဉ်များ.
အတော်ကြာရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. programming-Writing ကွန်ပျူတာ packages များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-အကဲခတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စံအတိုင်းအတာ, သို့မဟုတ်အခြားအချက်ပြသင့်လျော်စွာဖျော်ဖြေကာပစ္စည်းကိရိယာများလည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
ဂီယာအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြောင်းကိုပစ္စည်းကိရိယာကို Maintenance-ကွပ်မျက် upkeep အခါဆုံးဖြတ်ခြင်း.
လိုအပ်သောနည်းလမ်းများအသုံးချဖို့ပြုပြင်တာတွေ-ကိုပြုပြင်တာတွေအစီအစဉ်များသို့မဟုတ် devices များ.
ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-Completing စာမေးပွဲနှင့်စစ်ဆေးမှုများ, န်ဆောင်မှုများ, ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုမှန်းဖို့ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို.
systems လေထုထဲတွင်ဘယ်လိုချိန်ညှိအားသုံးသပ်ခြင်း-ဆုံးဖြတ်, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, နှင့်အခွအေနသက်ရောက်မှု impact နိုင်ပြီး technique ကိုအဘယျသို့သောလုပ်ဆောင်သင့်တယ်.
ပိုက်ဆံပြီးစီးခဲ့အလုပ်ဆည်းပူးဖို့သုံးစွဲခံရဖို့သွားပုံကိုချွေတာသုံးစွဲ-ကိုစူးစမ်း၏စီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်စာရင်းအင်းသည်ဤကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်..
ကုန်ပစ္စည်းနည်းလမ်-Discover ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်အဆောက်အဦဂီယာ၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုမှရတဲ့, နှင့်ထုတ်ကုန်အရင်းအမြစ်များကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ function ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
ဝန်ထမ်းများအရင်းအမြစ်များ-stimulation ၏ကြီးကြပ်မှု, အဆောက်အဦး, သူတို့လည်ပတ်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကိုညွှန်ပြ, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အဘို့အထိပ်ရှေးရှေးဖော်ထုတ်.
Affiliate ရဲ့ပမာဏ (သို့မဟုတ်နောက်ထပ် Two-နှစ်ငွေပမာဏ)
အကြီးတန်း High School တွင်ဘွဲ့ (GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်း High School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
ထက်ပိုပြီး4နှစ်ပေါင်း, သလောက်ခြောက်အဖြစ်နှစ်နှင့်အပါအဝင်,
အကွောငျးရငျး – %
အာဏာ – %
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – %
ယဉ်ကျေးမှုနေရာချထားခြင်း – %
ဖိအားစာနာထောက်ထားရေး – %
ယုံကြည်စိတ်ချ – %
Depth ၏အသိအမြင် – %
ခွန်အား – %
လွတ်လပ်ရေး – %
တီထွင်မှု – %
သံနှင့်သံဘောင်များကိုအလုပ်သမားများကယောဘဖျေါပွခကျြအားဖြည့် / အခန်းကဏ္ဍနှင့်ခံမှုနမူနာ